ဘဝမှတ်တိုင်: လောကနီတိ Mobile App
လောကနီတိ Mobile App
မင်္ဂလာပါ။ မြန်မာ လောကနီတိ Mobile App ကို စတင် download လုပ်ယူနိုင်ပါပြီ။ App Widget သုံးပြီး Home Screen ပေါ်မှာ တင်ထားနိုင်တယ်။.. တတ်စွမ်းသမျှ ကြိုးစားထားပါတယ်။ လိုနေတာ၊ မှားနေတာများ တွေ့ရင်လည်း ပြန်ပြောပေးပါ။ အခြားသူများကိုလည်း သိအောင် အပန်းမကြီးရင် ရှယ်ပေးပါဦးလို့..
Morning... We are happy and excited to share with you that "Myanmar LokaNiti" mobile app is available to download. Don't forget to use the Widget on your home screen. We have tried our best. Please leave us feedback and help us to share with your friend. Please enjoy ~
Samsung App Store Download:
**Pending Samsung Approval
ဒီနေ့ဟာ အားလုံး လေးစား အားကျတဲ့ မြန်မာလွတ်လပ်ရေး ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းရဲ့ မွေးနေ့ပါ။ နိုင်ငံ၊ ရပ်ရွာနှင့် မိဘ ဆရာ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းများ အားထား လေးစားရတဲ့ လူတော် လူကောင်းများ ဖြစ်အောင် ကြိုးစားနိုင်ကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုရင်း...
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 2/12/2014 11:25:00 pm